TicWatch Pro 3 Ultra LTE oo ka socota Mobvoi, falanqayn qotodheer | Qalabka Wararka
TicWatch Pro 3 Ultra LTE ee Mobvoi, falanqayn qotodheer
Saacadaha casriga ah waxay noqdeen qalab si caadi ah u sii badanaya, inkastoo bilowgoodii adkaa ay sabab u tahay xaddidaadda sifooyinkooda farsamo, soo-kordhinta dhawaanahan ee noocyada caanka ah waxay ku guulaysteen inay saacadaha smart ka dhigaan doorasho dhab ah iyo mar kasta.
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra LTE cusub, smartwatch aad u dhameystiran oo leh dhammaan astaamaha laga fili karo. Nala hel waxbadan oo ku soo kordhay suuqa oo ay samaysay Mobvoi
1 Naqshad: muuqaal dhaqameed iyo tayada Mobvoi
3 Dhammaan dareemayaasha, dhammaan sifooyinka
4 Ismaamul wanaagsan iyo laba shaashad
Naqshad: muuqaal dhaqameed iyo tayada Mobvoi
Shirkadda asal ahaan ka soo jeeda Aasiya waxa ay soo saareysay qalabkan oo kale dhowr sano hadda, caannimada ay gaartayna ma ahayn mid si kadis ah ku timid. Guud ahaan, waxa ay sharad ku samaysaa iska caabin, adkaysi iyo isu-urursi wanaagsan oo ay ku xidhato xidhitaankeeda si ay ugu qanciso macmiilka in uu wax-soo-iibsi fiican ku sameeyay dhinaca lacagta. TicWatch Pro 3 Ultra LTE uma eka mid ka reeban. Waxa ina soo food saartay qalab leh garaac wareeg ah, oo uu ku taajaysan yahay chronograph iyo laba badhan oo go'an oo ku yaal geesta midig ee saacadda. Waa qalab qiimihiisu uu horeba inoogu saadaaliyay inuu tayo leeyahay.
Dhabarka ayaa loogu talagalay dekedda wax ku dallaca magnetized iyadoo la isticmaalayo biinanka dhaqanka, dareemayaasha saacadaha u go'an iyo adapters suunka. Ma lumin fursad aan ku xusno in isku darka walxaha loogu talagalay in lagu gaaro a Shahaadada ilaalinta biyaha iyo cimilada 810G, heerka militariga marka waa in aynaan wax dhibaato ah kala kulmin isticmaalka maalinlaha ah, tani waa saacad go'aan u adkaysanaysa.
Cabirrada: X x 47 48 12,3 mm
Miisaanka: Gram 41
Qalabka: caag iyo bir
Shahaadooyinka: IP68 iyo MIL-STD-810G
Waa la yaab leh iftiinkeeda, maadaama saacaddu ay ka samaysan tahay gebi ahaanba caag matte ah, taas oo bixin doonta iska caabin inkastoo, sida aynu sheegnay, Waxay leedahay gariir sare oo u eg qaab taariikhi ah oo ka samaysan bir. Suunka lagu daray qalabku wuxuu leeyahay maqaar bunni ah oo dibadda ah iyo nooc ka mid ah dahaarka silikoon ee gudaha, isku-dhafka wanaagsan ee aan jecelnahay wax badan oo kala duwan. Iyada oo loo eegayo cabbirka iyo habka qalabeeyayaasha suunka, waxaan awood u yeelan doonaa in aan ku darno nooc kasta oo suunka caalamiga ah ee jecel.
Waa in la ogaadaa in tani ay tahay saacad leh nuqulkii ugu dambeeyay xidho OS, waa Operating System-ka ay Google bixiso ee la xidho iyo kuwaas oo magacyo badan oo badan ay ku sharxayaan si ay u mideeyaan fursadaha ay bixiyaan dadka isticmaala iyo, wax kasta oo ka sarreeya, abuuraan buug-gacmeedka codsiyada wanaagsan oo macne u ah qalab leh sifooyinkan. Laakiin gudaha waxa ku jira yaabab kale oo badan.
Si aad u bilowdo dooro processor-ka Snapdragon Wear 4100+ ka Qualcomm, sharadka saacadaha smartwatches ee soo saaraha processor-ka ugu caansan, oo leh waxqabad la xaqiijiyay iyo in laga arki karo waxqabadka saacadda lafteeda, taas oo na siisay xawaaraha iyo dareeraha qaybo siman.
Ugu dambeyntii, waxaan haysan doonaa 1GB ee RAM, farsamo ahaan ku filan waxqabadka iyo baahida qalabka leh sifooyinkan, iyo haa, kaliya 8GB ee xusuusta kaydinta. gudaha labadaba codsiyada iyo hawlaha kale ee naloo oggolaaday in aan ku kaydinno muusiga khadka tooska ah ee codsiyada qulqulka qaarkood, saacadaha ama nooc kasta oo kale oo ka kooban. Ha iloobin, si kastaba ha ahaatee, in ugu yaraan 3,6GB ee 8GB ee kaydinta gudaha mar hore lagu qabsaday si asal ah.
Iibso TicWatch Pro 3 Ultra LTE qiimaha ugu fiican ee Amazon.
heerka hawlgalka Ma haysan doono oo kaliya af-hayeenka taranka waxa ku jira iyo ogeysiisyada, laakiin sidoo kale makarafoon Oo runtii, sida aad awoodid inaad qiyaasto, waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah u wacdo oo aad u hesho wicitaanada taleefanka saacadda, waxay sameyneysaa macno gaar ah haddii aan ku xisaabtano in heerka isku xirnaanta aan u leenahay sifooyinka farsamo ee lagama maarmaanka ah.
Noocaan la falanqeeyay wuxuu leeyahay isku xirka wireless 4G/LTE, in kasta oo wakhtigan la joogo ay la jaan qaadayso oo keliya Vodafone OneNumber iyo Orange eSIM eSIM-yada, markaa maadaama aan haysano O2 ma aannan awoodin in aan xaqiijino baaxadda iyo fulinta isku xirnaanta 4G. Haa, waxaanu xaqiijinay shaqada saxda ah ee doorarkaada kale ee isku xidhka bilaa-waayirka ah, taasi waa, WiFi 802.11b/g/n, chip NFC taas oo noo adeegi doonta qaabeynta iyo dabcan lacag bixinta, iyo sidoo kale Bluetooth 5.0. Haddii aadan rabin ama aadan xiisaynaynin tignoolajiyada 4G ee qalabkan oo kale, qiimo yar oo ka hooseeya waxaad ku iibsan kartaa nooc kaa saaraya shaqadan.
Dhammaan dareemayaasha, dhammaan sifooyinka
Ticwatch Pro 3 Ultra wuxuu leeyahay dareemayaasha lagama maarmaanka ah oo aan ku soo bandhigno saacadihii ugu dambeeyay ee kala duwan si aan u yeelanno kormeer sax ah oo ku saabsan caafimaadkeena, tababarkeena iyo dabcan maalinteena maalinlaha ah. Dhammaantood waxaanu ku samaynay tijaabo taxane ah oo aanu ku samaynay tababar, annagoo adeegsanayna Apple Watch-ka caanka ah ee sida wanaagsan loo yaqaan oo tixraac ahaan ah, iyadoon kala duwanaansho la arki karin.
Tani waa liiska dareemayaasha aan hayno:
Dareemaha garaaca wadnaha ee PPG
SpO2 dareenka buuxinta ogsijiinta dhiigga
Ismaamul wanaagsan iyo laba shaashad
In kasta oo laga yaabo inaysan sidaas ugu muuqan nashqaddeeda awgeed, xaqiiqadu waxay tahay in Ticwatch Pro 3 Ultra uu leeyahay laba shaashad, AMOLED cusub oo 1,4-inji ah oo leh xallinta 454 × 454 pixels oo ah 326 pixels halkii inch, iyo is dulsaar FSTN Had iyo jeer Mid ina tusa macluumaadka madow iyada oo loo marayo matrix LCD ah, sida xisaabiyeyaasha ama saacadaha hore. Marka aan hawlgelinno "qaabka muhiimka ah" ee saacadda, shaashaddaan waa la daminayaa, ama si toos ah marka uu 5% batteriga ka tago.
577 batari Mah
Fiin dameeraha magneticized (kuma jiraan adabtarada korantada) iyada oo loo sii marayo USB
Mobvoi App-ka waxa uu la jaan qaadayaa Android iyo iOS, isaga oo la dhexgaya GoogleFit iyo Health.
Tani waxay waxooga dhimaysaa xaglaha daawashada ee shaashadda AMOLED, laakiin waa shaqo xiiso leh marka aan maalmo dheer guriga ka maqnaano, tusaale ahaan tababarka buuraha.
Kala duwanaanshaha weyn ee xirashada OS waxay noo ogolaaneysaa inaan haysano tiro aan xadidneyn oo codsiyo ah iyo qaabeynta la socodka caafimaadka iyo isboortiga, sida SaludTic ama Google Fit ama Tic Health, laakiin waxaan sidoo kale geli karnaa oo habeyn karnaa mid kasta oo ka mid ah codsiyadan si ay u bixiso noo xogta si dhab ah oo waxtar noo leh. Sida iska cad waxaan haynaa la socodka hurdada, dariiqa loo maray, buug aan la tirin karin oo ah layliyo horay loo sii go'aamiyay iyo inta kale ee hawlaha heerka ogeysiisyada, isdhexgalka iyo macluumaadka laga filan karo saacada smartwatch ee sifooyinkan leh.
Khilaafku wuxuu ku yimaadaa qiimaha, halkaas oo aan ka helno noocaan oo leh LTE € 365 (€ 299 nooca aan lahayn LTE) kaas oo si toos ah ula tartamaya buug-yaraha dhaqaalaha oo leh beddelka Huawei, Samsung iyo xitaa Apple. Inkasta oo ay bixiso iska caabin weyn iyo wax-ku-bedelnaan badan, waxay gelisaa isticmaalaha jid-goyn maadaama uusan si gaar ah ugu muuqan qiimaha.
TicWatch Pro 3 Ultra LTE, falanqayn qotodheer
Kala duwanaansho iyo dareeme fara badan
Naqshad soo jiidasho leh iyo qalab weyn oo leh shaashad labanlaab ah
Kuma soo baxayo qiimaha
Waxaan sharad ku yeelan lahaa chassis birta ah
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » TicWatch Pro 3 Ultra LTE ee Mobvoi, falanqayn qotodheer
Huawei oo aad uga fog joojinta waxay soo bandhigaysaa laalaab iyo astaamo cusub oo badan
Doogee V20: qiimaha iyo taariikhda la sii daayo